Yonga u-30% kokubhaliselwe kwe-Fluid Mobile Prototyping
Okuwuketshezi: Design, Test futhi Yabelana Ngama-Prototypes Wakho Eselula
NgoLwesihlanu, ngoJuni 27, i-2014 NgoLwesine, Juni 26, 2014 Douglas Karr
Angiqiniseki ukuthi ngake ngavivinya injini elula yokwenza isibonelo kune-Fluid. Ngokuzimisela, kufanele nikeza umhleli wabo idrayivu yokuhlola, ilula ngokumangazayo, inembile futhi inephalethi eliqinile lokuhudula bese uphonsa izingxenye zesibonisi somsebenzisi ezingena kugridi nosayizi ngokukhalipha.
I-Fluid inezinhlelo zokusebenza zesidlali sangokwezifiso se-Android, i-iPhone ne-iPad. Ziyakuvumela ukuthi wakhe ama-prototypes axhunyiwe ama-multi-screen, ukhiphele ukuphuma kwesikrini, engeza ukushukuma komzimba nokuguquka ngokuswayipha, ukuthepha, ukuthepha kabili, isilayidi, ukufiphala nezenzo ze-flip. Ngaphandle kwamawijethi we-iOS, Android, Windows 2,000 kanye newijethi ye-UI eyenziwe ngomumo - ungalayisha nezithombe zakho.
Martech Zone abafundi bangathola I-30% isephulelo sokubhalisile sezinyanga eziyisithupha se-Fluid UI Uhlelo lobuchwepheshe ngesixhumanisi sethu sokuxhumana!
Kuya ngokuthi ukhetha luphi uhlelo, ungaba namaphrojekthi amaningi asebenzayo, iforamu kanye / noma ukwesekwa kwe-imeyili, amaphrojekthi asebenzayo nezikrini zokulayisha ngokwezifiso. Lonke icebo liza namaphrojekthi angasebenzi angenamkhawulo, amakhasi angenamkhawulo ngephrojekthi ngayinye, umlando wenguqulo, ikhono lokuhlola kudivayisi, nokwabelana ngokusebenzisana kwethimba. Uketshezi lunikeza ne ipulatifomu yebhizinisi itholakalela abenzeli kanye nezinkampani
Tags: androidthepha kabilii-droid prototypingsiphelileflipuketsheziuketshezi uiiOSios prototypingi-ipad prototypingI-prototyping ye-iphoneprototyping yeselulai-prototypingprototyping umhlelislideiswayiphathintaui prototypingwindows 8i-wireframe
Douglas Karr Friday, June 27, 2014 Thursday, June 26, 2014
2014: Unyaka Wokuhlangenwe Nekhasimende
Vero: I-imeyili Ukuzenzakalela Nokumaketha kabusha